Author: Yogal Grogar
Eedaysanuhu wuxuu xaq u Somalilanr in go’aan maxkamadi ku ridday uu racfaan uga qaato maxkamadda ka sarraysa. Haddii uu Golaha Guurtidu oggolaan waayo ama ku soo jawaabi waayo bil gudaheed, mashruuc-sharcigu wuu ansaxaya, sidaas ayaana Madaxweynaha loogu gudbinayaa. Fadhiga ugu Horeeya ee Golaha Guurtida. Golaha Wakiiladu waxa uu awood u leeyahay inuu u yeedho Xukuumadda ama hay’adaheeda iyo wakaaladaheeda, si uu wax uga waydiiyo gudashada xilkooda.
Haddii Golayaashu diidaan mudanaha Madaxweynuhu u magacaabay Madaxweyne Ku-xigeenka, waxa waajib ku ah inuu mudane kale ku magacaabo muddo aan ka badanayn soddon maalmood gudahood oo ka bilaabmaysa taariikhda dudmada Golayaasha. Nidaamka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa saldhig u ah nabad, talo-wadaag, dimuqraadiyad iyo hannaanka xisbiyada badan.
Dawladda ayaa muwaadiniinta u dammaanad qaadaysa xuquuqda iyo xorriyadaha. Haddii ay Golayaashu diidaan codsiga xil-ka-tegidda ee ku sheegan faqradda 4aad ee qodobkan waxaa Madaxweynaha ama Madaxweyne-ku-xigeenku xaq u yeelanayaa in uu mar labaad keensado codsi dalab xil-ka-tegis ah muddo aan ka badnayn saddex bilood marki uu codsiga hore qortay; waxaana waajib ku ah labada GoIe in ay xil-ka-tegidda ka oggolaadaan. Haddii mid ka mid ah xaaladaha ku sheegan qodobka 86aad ay ku timaado Madaxweynaha saddexda sano ee u horreeya shanta sano ee xilka loo doortay, waxa Madaxweyne Ku-xigeenku noqonayaa Madaxweyne ku meel gaadh ah, waxaana Madaxweyne lagu dooranayaa muddo lix bilood gudohood ah.
Hay’adaha Dawadda ee Qaranku waa: Xubnaha Golaha Guurtida waxa lagu soo dooranayaa doorasho, habka doorashadana waxa nidaaminaya xeer. Haddii uu istiqaalad dhiibo ama uu geeriyoodo. Haddii uu xukun ciqaabeed oo kama damays ahi ku dhaco.
Dhismaha xoghaynta Golaha Guurtida waxay la mid tahay ta Golaha Wakiilada. Guddiyada Golaha Wakiiladu waxay awood u somaoiland in ay Wasiirka ama madaxda hay’adaha Dawladda ama madaxda sare ee kale ee Qaranka ee hawshoodu khusayso, in ay wax ka waydiiyaan gudashada xilkooda. Barashada iyo tarbiyadda Diinta lslaamku waa dariiqad asaasi somalilanr dhammaan heerarka soomaliland waa ku khasab, isla markaana horumarinta dugsiyada Qur’aanku waa waajib saaran Dawladda. Haddii uu arko in mashruuc-sharcigaasi ka hor imanayo qodob ama qodobo Dastuurka, waa inuu sidaa ku wargeliyaa Shir-guddoonka iyo Xeer-ilaaliyaha Guud oo u gudbin doona Maxkamadda Dastuuriga ah.
Xukuumaduna way ku sii dhaqmi kartaa xeerarkaas inta ay Daetuurka go’aan ka gaadhayaan. Doorashada Xubinta Golaha iyo Muddada Xilka.
Guddida Culimada sommaliland Waajibaadka Guddida. Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay aaminsan tahay mabaadi’ida aayo-ka-talinta ummadaha adduunka. Dawladana xilbaa ka saaran kor-u-qaadidda akhlaaqda iyo xirfad baridda maxbuuska si uu ugu noqdo bulshada isaga oo yeeshay dhaqan suubban. Haddii ansixinta miisaaniyadda cusubi dhammaan weydo ka hor bilowga sannad- maaliyadeedka cusub, waxa lagu dhaqmayaa miisaaniyaddii hore inta ay ka soo baxayso miisaaniyadda cusubi.
Magacaabidda iyo xil-ka-wareejinta madaxda sare ee Dawadda marka uu la tashado Wasiirka ku shaqada leh; isla markaana tixgeliyo Dastuurka iyo xeerarka u gaarka ah. Wasaaradda Cadaaladdu waxay u xil-saaran tahay fulinta go’aanada maamul ee ka soo baxa Guddida Cadaaladda. Lama xidhi karo garsoore ama ku-xigeen Xeer-ilaaliye Guud haddii aanay Guddida Cadaaladdu oggolaanin, hase yeeshee looma baahna dasyuurka Guddida haddii garsooraha ama Ku-xigeenka Xeer-ilaaliyaha Guud la qabto isaga oo faraha kula jira dembi ciqaabtiisa ugu yari ay tahay 3 saddex sannadood oo xadhig ah.
Ujeedada ayaa lagu sheegay in dadweynaha la baro xuquuqul insaanka, waajibaadka dalku ku leeyahay muwaadinka iyo xuquuqda uu qofku leeyahay labadaba. Waxa xubintu muddada dastuuriga ah hayn doontaa xilka bo magacaabay; isla markaana waayi doontaa xubinnimadii Golaha Wakiilada. Inuu ka taliyo muran kasta oo Ia dastuurkx waafaqsanaanta Dastuurka. Aafooyinka dhaca sida abaaraha, duufaanada, cudurrada faafa, dhul garurka iyo dagaalada waxay Dawladdu ka yeelanaysaa ku-talagal.
Haddii Madaxweynaha iyo ku-xigeenka Mad axweynaha lagu oogo dembiyada kala ah: Waayidda Xubinimada Golaha Wakiilada.
Habaynta nidaamyada dhaqaale iyo kuwa lacageedba. DaIka Jamhuuriyadda Somaliland waxa uu ka kooban yahay gobollo; gobol kastaana waxa uu u sii qaybsamaa degmooyin.
Boggan waxaa markii ugu dambeysay wax laga bedelay Mashruuc-sharci waxa uu xeer ku noqonayaa ansixinta Golaha Wakiilada waxaanu dhaqan gelayaa ka dib marka uu Madaxweynuhu saxeexo sida ku cad Qod. Waxaa ka reebban xukunkaas faqradda laad wixii cay ama aflagaado ah ee xubintu geysato. Waa inuusan dembi maxkamadi ku xukuntay ka gelin Qaranka Somaliland. Labada Gole ee Baarlamanku waxay yeelanayaan fadhiyo ay wadaagaan iyo kuwo gaar u kala ah. Muuqaalka Akhri Itusi xogta Itusi taariikhda.
Bannaanaanshaha Jagada Golaha Guurtida iyo soo Buuxinteeda. Wasiirada ama Wasiir-ku-xigeenadu ma qaban karaan shaqo kale oo ka baxsan tan Qaranka.
Shuruuradaha Qofka lsu Taagaya Doorashada. Maxkamadaha Ciidamada iyo Xeer-ilaalintooda.
Wax-ka-beddelka ama bedelaadda calanka, astaanta, iyo heesta qaranka, waxa osmaliland go’aan Golaha Wakulada. Dawladdu waxay mudnaanta koowaad siinaysaa waxbarashada asaasiga ah; waxaanay u hawl galaysaa in gobollada iyo degmooyinka lagu baahiyo waxbarashada asaasiga ah. Muwaadiniinta Somaliland iyadoon lagu kala saarayn midabka, qabiilka, dhalashada, luqada, lab iyo dhedig, hantida, mudnaanta, afkaarta iwm, waxay sharciga hortiisa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad siman.
Maxamadaha ciidamada iyo Xeer-ilaalintooda waxa nidaaminaya xeer gaar ah. Hadda waxaa jira guud ahaan Articles Qodobo marka loo eego hore Articles. Madaxweynaha ayaa ku dhawaaqaya doorashada Golaha cusub bil ka hor dhammaadka muddada Golaha hore.
Hantida gaar ahaaneed ee lagu helay si xeerka waafaqsan, lalama wareegi karo dan guud awgeed mooyaane, iyadoo markaana Ia bixinayo cawil-celin munaasib ah. Maxamadaha Racfaanka ee Gobolladda; 3.